केशव स्थापितले भने– हेटौंडामा लोखर्के गनेर बसेको छु
Monday, 16 Apr, 2018 3:31 PM
३ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वमेयर केशव स्थापित चर्चित अनुहार हुन् । उनी काठमाडौंमा कायापलट गर्न सक्ने भन्दै बेलाबेला मिडियामा आफ्ना योजना सुनाउँथे । त्यसैले गत स्थानीयत तहको निर्वाचनमा उनी एमालेबाट मेयरका दाबेदार थिए । तर, पार्टीले विद्यासुन्दर शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएपछि अन्तत उनी पनि समर्थनमा लागे ।
पछि एमालेकै तर्फबाट उनी प्रदेश ३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने । उनी मन्त्री बनेको दुई महिना हुन लागिसक्यो ।
विगतमा मिडियामा बिभिन्न योजना सुनाउने उनी अहिले के गर्दैछन् ? के कस्ता योजना छन् ? यो आम जनताको चासो पक्कै हो । तर, यी तमाम प्रश्नको जवाफ मिल्नेगरी सोमबार एक गम्भीर जवाफ फर्काएका छन् । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘हेटौंडामा लोखर्के गनेर बसकेको छु ।’ उनको मतलब थियो कुनै काम नै पाएको छैन । उनले गाडीमा झण्डासमेत नहालेको बताए ।
‘अहिले मलाई मन्त्री भएजस्तोसमेत लागेको छैन । गाडीमा झण्डासमेत हालेको छैन । लोखर्के गनेर बसेको छु म हेटौंडामा ।’
स्थापितले हेटौंडाबाट राजधानी सार्नुपर्ने पनि बताए । एमालेकै कतिपय नेताहरु हेटौंडाबाट राजधानी सार्न हुन्न भन्ने मत राखे पनि आफ्नो त्यसमा सहमति नभएको उनको भनाई थियो । ‘केही एमालेकै मान्छेले हेटौंटाबाट सार्न हुन्न भन्छन्, मैले सार्ने हैन अन्त तोक्ने हो’ उनले भने ।